Ka inona moa io Izy nirahin’Andriamanitra io? Io teny - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Ka inona moa io Izy nirahin’Andriamanitra io? Io teny
Io teny izay nirahin‟Andriamanitra taty amintsika io (satria lasa olombelona ilay Teny), dia milaza Izy fa hoe : « amin‟ny maha irak‟Andriamanitra Azy izany », dia tao amin‟Andriamanitra Izy io no nivoaka avy tao:
Jaona 10:36–38 «36 moa Izay nohasinin’ny Ray ka nirahiny ho amin’izao tontolo izao va no ataonareo hoe: Miteny ratsy Hianao, satria hoy Izaho: Zanak’Andriamanitra Aho? 37 Raha tsy manao ny asan’ny Raiko Aho, dia aza mino Ahy. 38 Fa raha manao ihany kosa Aho, na dia tsy mino Ahy aza ianareo, dia minoa ny asa, mba ho fantatrareo sy hekenareo fa ny Ray no ato amiko, ary Izaho ao amin’ny Ray. »
Milaza Izy fa avy tao amin‟ny Ray mihitsy no nivoahany. Jereo tsara fa ny hoe: “ny Ray no ato amiko, ary Izaho ao amin’ny Ray”, izany hoe Ilay Andriamanitra tokana no miteny, ohatran‟ny hoe: izaho miteny, fa ilay teniko io dia ato anatiko. Ka milaza izany i Jesosy Kristy eto fa hoe: “Izy dia ao amin’ny Ray”, satria izy dia tenin‟Andriamanitra, ary raha milaza izy fa hoe “ny Ray ato amiko” dia manambara Izy fa ny Tenin‟Andriamanitra no nataony tonga nofo ho olombelona dia Izy izay miteny izany.
Ka io teny io izany dia ilay Tenin‟Andriamanitra, ilay RAY, satria io ilay hoe Jaona 1:1 « Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’ Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. »
Izany hoe i Jesosy Kristy miteny io hoe: “ny Ray ato Amiko ary Izaho ao amin’ny Ray”, dia mazava izany fa ilay teny dia ao amin‟Andriamanitra, ohatra ny hoe: raha miteny aho izao dia ato amiko ny teniko, ka raha ity teniko ity izao no alefako amin‟ny olona iray, izany hoe sahala amin‟ny feo “enregistré”na amin‟ny “bande” iray dia alefa any amin‟ny olona iray ohatra ireny cassette ireny, dia miteny ilay “appareil” rehefa alefa ilay” bande”. Dia raha miteny izany ilay “appareil” dia milaza fa izaho izao miteny izao, dia tsy izaho ara-bakiteny no miteny fa ilay” bande” izay nampidirana feo tato no miteny, ilay bande no ato anatiko, ary izaho ao amin‟ilay bande. Dia angamba ohatra sahala amin‟izay no ahazoantsika manazava ilay izy: Ilay Jesosy Kristy izany dia nivoaka tao amin‟ny Ray, ary Izy tao amin‟ny Ray ary ny Ray tao aminy, satria teny izy io, ka izay no mahatonga azy ilaza fa, ny Ray no ato aminy ary Izy dia ao amin‟ny Ray.
Ohatra iray hafa ihany koa: satria be dia be ny toko sy andininy izay milaza izany hoe: “izy dia ao amin’ny Ray izany ary ny Ray dia ao aminy”
Jaona 17:18–21 «18 Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin’izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin’izao tontolo izao. (io izany ilay teny nirahin‟Andriamanitra ho tonga eto ambonin‟ny tany, eto amin‟izao tontolo izao ity.)19 Ary ho an’ireto no anamasinako ny tenako, mba hanamasinan’ny fahamarinanao azy. 20 Nefa tsy ho an’ireto ihany no angatahako, fa ho an’izay mino Ahy koa noho ny teniny; 21 mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy; mba hinoan’izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy. »
Izany hoe: rehefa mandray ilay Tenin‟Andriamanitra ihany koa isika, dia lasa ao amin‟i Jesosy Kristy ihany koa, lasa ao amin‟Andriamanitra ihany koa, satria ilay Tenin‟Andriamanitra no aty anatintsika. Hoy izy “mba ho iray ihany izy rehetra mba ho tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao”,
Efa hitantsika teo aloha izany, fa Izy no voalohan‟ny zava-boahary rehetra. Misy zava-boahary betsaka any an-danitra any:
– misy ny anjely (Serafima, sy ry Gabriela, isan‟izany ry losifera),
– fa ny voalohany namboariny tamin‟izany dia ilay Teny nataony ho tonga olona, fa saingy io Teny io fony izy mbola tany amin‟ny voninahitra no niseho tamin‟i Daniela, araka ny nahitantsika teo aloha:
Daniela 10:4–9 «4 Ary tamin’ny andro fahefatra ambin’ny roa-polo tamin’ny volana voalohany, raha teo amoron’ny ony lehibe aho (Hidekela izany), 5 dia nanopy ny masoko aho ka nijery, ary, indro, nisy lehilahy iray nitafy rongony fotsy, ka tena volamena avy any Ofaza no nisikinany;
6 tahaka ny krysolita ny tenany. ary tahaka ny helatra ny tarehiny, ary tahaka ny fanilo mirehitra ny masony, ary mivolom-barahina manganohano ny sandriny sy ny tongony; ary ny feony toy ny feon’olona maro be;
7 ary izaho Daniela ihany no nahita ny fahitana; fa ny olona izay teo amiko kosa tsy mba nahita izany, fa toran-kovitra indrindra izy ka nandositra niery.
8 Ary dia nilaozana ho irery aho ary nahita izany fahitana lehibe izany, dia tsy nisy hery tafajanona tato amiko; fa nihasimba nivaloarika ny tarehiko, ary tsy nisy hery intsony tamiko. 9 Nefa nandre ny teniny ihany aho; ary nony nandre izany aho, dia renoky ny torimaso niankohoka tamin’ny tany. »
Tsy nisy nofon‟olombelona izany nahazaka an‟izany fisehoan‟i Jesosy Kristy izany, fony izy tany amin‟ny voninahiny. Ka io teny manana ny fahefany sy ny voninahiny, izay noharina tahaka izay nahitantsika azy izay, dia nentin‟ny Fanahy Masina, ka nataony tao an-kibon‟i Maria, (nofoanany ny fahefany sy ny voninahiny). Dia rehefa tonga tao Izy, dia novolavolain’ny Fanahy Masina tao, dia nivadika ho olombelona. Dia nofoanany avokoa, izay fitoviana tamin’Andriamanitra tao anatiny, ny fahefany sy ny voninahiny, dia afaka nifanerasera tamin’ny olona izy rehefa teraka, ka dia izay olona mifanena aminy izany dia tsy misy maty intsony na mandositra izany, na hoe tsy mahatanty ny voninahiny, fa efa nofoanany avokoa izany rehetra izany. Ka dia milaza an’izany matetika i Jesosy Kristy fa hoe “ny Ray no naniraka azy”, ohatra amin’izany ny Jaona 8:26 « Manana zavatra maro hilazana sy hitsarana anareo Aho, satria marina Izay naniraka Ahy; ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin’izao tontolo izao. »
Jaona 8:29 « Ary izay naniraka Ahy dia eto amiko; tsy nandao Ahy ho irery Izy, satria Izaho manao izay sitrany mandrakariva. »
Ilay Andriamanitra mihitsy izany no naniraka ilay Teniny, dia tonga tety ambonin‟ny tany, dia Izy no naniraka ahy hoy i Jesosy Kristy, ary dia mbola hiverina ho an‟ny amin‟Ilay Naniraka Azy Izy rehefa avy eo.
Jaona 16:28 « Eny, nivoaka avy tamin’ny Ray Aho ka tonga amin’izao tontolo izao; ary hiala amin’izao tontolo izao indray Aho ka hankany amin’ny Ray. »
Ka inona io nivoaka avy tamin’ny Ray io?
Ny TENY no nivoaka avy tao amin‟ny Ray.
Jaona 17:3 « Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, Izay efa nirahinao. »
Andriamanitra tokana izany no misy, ary Izy io no naniraka an‟i Jesosy Kristy,
Iza moa io Jesosy Kristy io?
Io dia ilay “parole de Dieu”, ka ilay Tenin‟Andriamanitra no navoakany tao aminy tao. Nirahiny nanao mission tety ambonin‟ny tany. Ka ny atao hoe “Fiainana Mandrakizay” izany dia ny hoe: “mahafantatra an’Andriamanitra tokana sy i Jesosy Kristy izay nirahiny” Jaona 17:3. Izany hoe ilay “parole de Dieu” ka izay mino an‟izany na musulman izy na indoiste, na boudiste, na kristiana ka mino an‟ilay Andriamanitra tokana sy i Jesosy Kristy izay nirahina, no hanana ny fiainana mandrakizay. Ary dia izay no mahatonga an‟i Jesosy Kristy hilaza ao amin‟ny Jaona 14 :6 manao hoe Jaona 14:6 « Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. »
Dia soloy ilay hoe: “Tenin‟Andriamanitra” ilay hoe “-KO” izay midika hoe Jesosy Kristy: « Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalan’ny TENIN’ANDRIAMANITRA. » Dia be dia be ny olona no tsy mahazo izay tiany hambara eo. I Jesosy Kristy io miteny io, ary ao amin‟ny Ray Izy. Ilay Tenin‟Andriamanitra izay ao amin‟ny Jesosy Kristy ity no mampiteny an‟i Jesosy Kristy, ka raha milaza Izy izany hoe: “Izaho no làlana sy fahamarinana”, dia midika hoe: « Hoy Jesosy taminy: Ny TENIN’ANDRIAMANITRA no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalan’ny TENIN’ANDRIAMANITRA. »
Ary izay no raharaha raha ohatra ka: Jesosy Kristy sandoka no hinoan‟ilay olona, satria ny tenin‟ilay Jesosy Kristy sandoka dia tsy Tenin‟Andriamanitra fa tenin‟ny devoly. Mbola ho hitantsika izany ao aoriana ao. Ka mazava be ny teny hoe « Hoy Jesosy taminy: Ny TENIN’ANDRIAMANITRA no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalan’ny TENIN’ANDRIAMANITRA. »
Mazava izany fa Andriamanitra dia tokana, araka ny namakiantsika azy teo hoe Jaona 17:3 « Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, izay efa nirahinao. »
Ka io Andriamanitra tokana io, dia misy TENY misy Fanahy, ary io Jesosy Kristy izay nirahiny io dia tsy Iza fa: ilay teny izay tao aminy izay nohariany talohan‟ny fiandohan‟ny zavatra rehetra, izay nahariana ny tany sy ny lanitra. Io Teny io no efa nohariany ho tonga olona ka ny endriny dia efa hitantsika teo aloha tao amin‟i Daniela
Daniela 10:4 – 9 «4 Ary tamin’ny andro fahefatra ambin’ny roa-polo tamin’ny volana voalohany, raha teo amoron’ny ony lehibe aho (Hidekela izany), 5 dia nanopy ny masoko aho ka nijery, ary, indro, nisy lehilahy iray nitafy rongony fotsy, ka tena volamena avy any Ofaza no nisikinany;
Izany hoe: raha ohatra izany ka misy Jesosy, na Kristy mipoitra amintsika amin‟izao fotoana izao, (satria i Jesosy Kristy efa any amin‟ny voninahiny), ka io Jesosy io mipoitra raha sendra mivavaka ianao amin‟ny alina, na sendra manonofy ianao ka misy Jesosy mipoitra aminao, ka tsy mirehitra sahala amin‟io ny masony, fa mety manao solomaso mainty izy ohatra, na miakanjo akanjo fotsy ihany izy, fa tsy misy fisikinam-bolamena no hanaovany ohatra fa “ceinture” hodi-boay sahala amin‟ireny” ceinture” hanaovan‟ireo pasitera maro isan-karazany ireny, na hoe hilaza i Jesosy Kristy fa hoe: nosoloina an‟ity” ceinture” hoditra ity ny fehikibo fa ny fiainana efa sarotra izao,na hoe isika koa efa tsy miravaka ka tsy hanao izany” ceinture” volamena izany, dia efa tsy izy izany. Na koa zakanao tsara ny fifampiresahana aminy fa tsy sahala amin‟ny maty ianao, dia tsy izy izany.
Izany hoe: ity fanambarana ato amin‟ny Apokalypsy ity, dia tsy fanambarana nomen‟i Jesosy Kristy fony Izy mbola tety ambonin‟ny tany, fa fanambarana nomen‟i Jesosy Kristy antsika kosa rehefa tonga tany amin‟ny voninahiny Izy.
Izay aloha ny teboka iray hamatarantsika an‟ilay Jesosy Kristy. Satria Izy io no noharina voalohany tamin‟ny zava-boahary rehetra, ary Izy dia Tenin‟Andriamanitra misy fahefana sy voninahitra lehibe izay tsy zakan‟ny olombelona rehefa nohariana Izy. Fa rehefa nidina tety an-tany Izy, dia nofoanany ny fahefana sy ny voninahiny, ka rehefa maty Izy dia niverina indray ny fahefany sy ny voninahiny.
Dia mbola hiroso ihany isika satria raha izany voambara izany, dia mbola maro ihany koa ny hilaza fa hoe: tena marina tokoa izany fa tena izay tokoa ilay Jesosy Kristy.
Fa misy tena mampiavaka Ilay tena Izy sy ny Jesosy Kristy sandoka izay tsy maintsy ho jerentsika ihany koa ity. Ary dia hiroso ao anatin‟izay ny fanazavana manaraka:
Matio 24:3–5 «3 Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva Izy, dia nanatona Azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe: Lazao aminay izay andro hahatongavan’izany, ary izay ho famantarana ny fihavianao sy ny fahataperan’izao tontolo izao. 4 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mitandrema, fandrao hisy hamitaka anareo. 5 Fa maro no ho avy amin’ny anarako hanao hoe: Izaho no Kristy, ka maro no ho voafitany. »
Napetraky Jesosy Kristy tsara izany fa amin‟ny fahataperan‟izao tontolo izao sy ny fihaviany, dia nambarany mazava tsara ny teny hoe “Mitandrema, fandrao hisy hamitaka anareo. Fa maro no ho avy amin’ny anarako hanao hoe: Izaho no Kristy, ka maro no ho voafitany” Voalazany izany fa dia ho be dia be tokoa ny ho voafitaka amin‟izany fotoana izany, ary dia misy tokoa izany ilay Jesosy Kristy sandoka.
Matio 24:23–26 «23 Koa raha misy manao aminareo hoe: Indro aty Kristy, na: Indro, ary Kristy ; aza mino ianareo. 24 Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny. 25 Indro, voalazako aminareo rahateo izany. 26 Ary amin’izany, raha misy manao aminareo hoe: Indro, any an-efitra Izy, aza mankany ianareo; Indro, ao amin’ny efi-trano Izy, aza mino. »
Izany hoe: tena hisy tokoa izany ny kristy sandoka. Hisy olona hilaza mihitsy izany hanao hoe: izaho mihitsy no kristy, ary dia mody tohatohanany amin‟ny toko sy andininy eo ilay izy an! Ohatra hoe: mahita toko sy andininy milaza izy ao amin‟ny baiboly hoe “tsy izaho intsony no velona fa i kristy no velona ato anatiko” dia hilaza izany izy fa hoe: izaho izany no kristy, fa ianareo mpiangonana tsy misy Kristy, fa izaho ilay pasitera ity mihitsy no kristy; dia mbola ampiany hoe “aleloia” mihitsy izany. Dia mety hisy mpiara-mivavaka aminy izany hilaza hoe: izaho ao amin‟ny ray, ary ny ray ato amiko, dia ianao mihitsy izany ilay kristy ry pasitera, dia mamaly koa ilay pasitera hoe tena izaho mihitsy no kristy, ka tsy misy mankany amin‟ny ray hafa tsy amin‟ny alalako.
Ka ireny olona ireny mihitsy ilay ampitandreman‟ny baiboly, fa tsy izay misora-tena ho kristy, na eto Madagasikara, na any ivelany, no tompon‟ny fanambarana ato amin‟ny apokalypsy. Mazava ny tenin‟ny baiboly, fa hoe tandremo sao hisy hamitaka anareo. Izao no hilazany azy ao amin‟ny 1 Jaona 2:22–23 «22 Iza no mpandainga, afa-tsy ilay mandà an’i Jesosy tsy ho Kristy? Izy no antikristy*, dia izay mandà ny Ray sy ny Zanaka. [* Na: ilay antikristy] 23 Izay rehetra mandà ny Zanaka no tsy manana ny Ray koa; izay manaiky ny Zanaka no manana ny Ray koa. »
1 Jaona 2:18–19 «18 Rankizy, izao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny* antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady; koa izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. [* Na: ilay] 19 Avy tamintsika ihany no niala ireo, nefa tsy mba namantsika izy; fa raha tàhiny namantsika izy, dia ho nitoetra tamintsika ihany; fa efa niala izy, mba haseho fa tsy isantsika izy rehetra. » Izany hoe io antikristy io hoy izy dia efa eto amintsika sahady, izany no midika fa efa tonga ny ora farany. Ka ilay antikristy dia tsy iza fa ilay Jesosy Kristy sandoka, ilay miteny hoe: “indro aty izaho, indro ary izaho”.
Isika izany raha maheno olona milaza fa izy no Jesosy Kristy, na inona fomba hilazany azy, na inona dia tadidio fa tsy ilay olona io no miteny an‟izany fa ilay satana, na ilay fanahy mamitaka ao anatiny no miteny. Ary izay olona voafitany rehetra dia manao hoe “aleloia” avokoa, io ilay miteny ao amin‟ny radio io. Izay no mahatonga an‟i Jesosy Kristy hilaza hoe: “tandremo fa sao hisy hamitaka anareo fa maro no voafitany”. Dia mampitandrina antsika izany i Jesosy Kristy mba tsy ho voafitak‟izany Jesosy Kristy sandoka izany isika.Ka tsy i Pasitera Mailhol no mampitandrina antsika fa i Jesosy Kristy mihitsy. Ary rehefa misy milaza fa izy no kristy, na aiza na aiza no toerana hilazany an‟izany, na eny an-dalambe, na any ampiangonana, na eny an-tsena, na eny amin‟ny radio, na televiziona, na eto Madagasikara, na any ivelany, dia tsarovy fa izany no antikristy efa tonga sahady, kanefa hoy Jesosy “maro no ho fitahin’izy io”.
Matio 24:23–24«23 Koa raha misy manao aminareo hoe: Indro aty Kristy, na: Indro, ary ; aza mino ianareo. 24 Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny. »
Matio 24:26 « Ary amin’izany, raha misy manao aminareo hoe: Indro, any an-efitra Izy, aza mankany ianareo; Indro, ao amin’ny efi-trano Izy, aza mino. »
Tsy mila porofo betsaka izany, fa rehefa misy milaza an‟izany fotsiny, dia mialà ao amin‟izany toerana izany, fa hahita loza amin‟izany ianao raha toa tokoa maheno an‟izany nefa tsy mivoaka amin‟izany. Ary dia betsaka tokoa ny olona no hilaza an‟izany rehetra izany, na amin‟ny gazety, na any ampiangonana, na dia tohatohanany amin‟ny toko sy andininy aza ilay izy.
Misy koa olona milaza fa nifanena tamin‟i Jesosy Kristy, ary tsy vitsy izy ireo fa efa maromaro ihany izay. Ka raha milaza an‟izany izy, ary tsy araka io efa nahitantsika azy eo ambony io no fomba nahitany azy, dia efa tokony ho mailomailo ihany isika. Sao dia ho fitahin‟izay fisehoana izay, fa io fisehoany io tokoa, dia tsy hain‟i satana alain-tahaka mihitsy. Mila mitandrina isika amin‟izany trangan-javatra izany. Ka dia isika izany angamba no faran‟izay dondrona sy kentrina indrindra, raha mbola ho voafitak‟izany olona izany, izay milaza fa izy no Jesosy Kristy, izy amin‟io dia manao akanjo fotsy lava, ny volo dia lava, ary mety mbola hanao solomaso Rayban ihany koa angamba. Dia manao miracles be dia be izy, kanefa efa voasoratra fa hanao famantarana sy fahagagana maro izy. Dia efa nisy olona niteny an‟izany anie e! eny fa na dia eto Madagasikara aza dia efa nahenoana an‟izany teto Antananarivo, izay nilaza fa hoe izy hono no Jesosy Kristy, kanefa dia misy olona tokoa manaraka azy, dia manao hoe haleloia ny olona fa ianao tokoa no kristy, ka ny teny hoentiny manamarina izany dia ny hoe: “tsy izaho intsony no velona fa i Jesosy Kristy no velona ato anatiko”. Dia ireo olona marobe manaraka azy izany dia tsy misy kristy, fa izy irery no kristy, dia tena mampalahelo sy mampihomehy ny olona fa izany hoe tsy fantany izay ataony, ary ny mivavaka ho azy no tokony hataontsika. Ary dia mbola hisy hiteny ihany koa ao amin‟ny radio.
Voalazan‟ny soratra masina ihany koa fa ny antsoina hoe ny filazantsara ny famonjena dia ny hoe: “Jesosy Kristy maty hamonjy antsika”. Ka ny hilazan‟ny filazantsara azy izany ato amin‟ny 1 Korintiana 15:1–4 «1 [Ny amin’ny fitsanganan’ny maty] Ary ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo, 2 izay amonjena anareo koa, raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo, raha tsy nino foana ianareo.
3 Fa natolotro anareo ho isan’ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, 4 dia nalevina, ary natsangana tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; »
Mba anavahantsika tsara ilay tena Kristy sy ilay kristy sandoka ihany koa izany, dia misy toerana anankiray ahafahanao manavaka tsara Azy, ary mba ahafantaranao tsara hoe iza moa ity tompon‟ny teny ato amin‟ny boky apokalypsy ity. Dia hoy izy hoe « Fa natolotro anareo ho isan’ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, dia nalevina, ary natsangana tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; »
Inona ny Soratra Masina milaza ny nahafatesan‟i Jesosy Kristy?, ary andro inona no nahafatesan‟i Jesosy Kristy?
Raha araka ny voalazan‟ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin‟ny andro fahatelo Izy. Izany hoe ity Jesosy Kristy lazaina ato amin‟ny
Soratra Masina ity izany dia:
– maty araka ny soratra masina,
– nilevina araka ny soratra masina
– natsangana tamin‟ny andro fahatelo araka ny soratra masina.
Io izany no tompon‟ilay fanambarana ato amin‟ity bokin‟ny apokalypsy ity, satria misy Jesosy Kristy torian‟ny olona ihany koa any, izay maty tsy araka ny Soratra Masina, nilevina tsy araka ny Soratra Masina; nitsangana tsy araka ny Soratra Masina. Dia jereo tsara, fa ireo olona minoan‟ilay Jesosy Kristy maty tsy araka ny soratra masina ireo, dia mihezaka ihany koa izy ireo manazava ny apokalypsy, satria izay ataon‟i Jesosy Kristy ihany no alain‟izy ireo tahaka. Raha manasitrana i Jesosy Kristy dia manasitrana ihany koa izy, dia hitantsika izany ao amin‟ny
Matio 7:22 – 23 «22 Maro no hanao amiko amin’izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin’ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia* tamin’ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin’ny anaranao va izahay? [*Demonia = fanahy ratsy, na anjely ratsy] 23 Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, ianareo mpanao meloka. »
Raha ny anjelin‟i Jesosy Kristy miseho tahaka ny anjelin‟ny mazava; dia ilay satana ihany koa dia mba miseho ohatra ny anjelin‟ny mazava mba mamitaka ihany koa izy. Izany hoe Izay zavatra rehetra ataon‟ny Jesosy Kristy dia alain‟i satana tahaka avokoa. Hitantsika izany ato amin‟ny 2 Korintiana 11:12-15 «12 Fa izay ataoko no mbola hataoko ihany, mba hampitsaharako ny famelezan’izay mitady hamely, mba ho hita fa tahaka anay ihany izay amin’ny izay ireharehany. 13 Fa Apostoly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny Apostolin’i Kristy. 14 Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin’ny mazava. 15 Koa tsy zavatra lehibe tsy akory, raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon’ny fahamarinana; nefa ny farany ho araka ny asany ihany. »
Izany hoe ilay kristy sandoka izany dia tsy maty araka ny soratra masina, tsy nilevina araka ny soratra masina, ary tsy nitsangana araka ny soratra masina. Fa izy koa dia mampianatra fa kristy dia maty, sy nitsangana ary nilevina.
Dia toy izany koa raha nampianatra i Kristy fa ity fanambarana ato amin‟ny apokalypsy ity dia avy amin‟Andriamanitra, dia mba ho entiny ihany koa ity fanambarana io ka mba misandoka an‟io ihany koa izy, mba mitondra an‟io ihany koa izy, fa izao ny farany dia ho araky ny asany ihany; tsy maintsy ho fantatra hoe: iza ireo mitondra hafatra ireo?, iza ireo miseho ohatra ny anjelin‟ny mazava ireo?, mpanompon‟iza ireo?. Dia mbola ho resahintsika eto lava be eto moa izay resaka izay hoe: ahoana tokoa ny fipetrak‟ity resaka ity?satria dia misy tokoa io kristy sandoka io, misy tokoa ireo mpanompon‟ity kristy sandoka ity, misy tokoa ny anjelin‟ity kristy sandoka ity.
Amin‟ny lesona manaraka izany dia ho jerentsika ny hoe: ahoana ny amin‟ity Jesosy Kristy ity, izay maty araka ny soratra masina, nilevina araka ny soratra masina?. Inona ary ny soratra masina izay miresaka an‟izany fahafatesany sy ny nilevenany izany, sy ny nitsanganany izany? mba ahalalantsika ny hoe: iza marina moa ity Jesosy Kristy tompon‟ny fanambarana ato amin‟ny apokalypsy ity?, ka raha vao tsy mifanaraka amin‟izany ny nahafatesany sy ny nilevenany sy ny nitsanganan‟izay Jesosy Kristy inoan‟ny olona, dia aoka isika ho mailo fa mazava ny Soratra Masina.Io Kristy izay nomen‟Andriamanitra ity fanambarana ity, dia mazava fa nandeha araka izay nanirahana Azy, avy tao amin‟ny Ray izy no nivoaka ary mbola hiverina any amin‟ny Ray. Fa eto kosa dia mazava fa maty araka ny Soratra Masina Izy, izay namonjena antsika; nilevina araka ny Soratra Masina izay hamonjena antsika no nilevenany, ary nitsangana araka ny Soratra Masina izay hamonjena antsika.
Ho jerentsika manaraka ary ny hoe:
Ny endriky Jesosy Kristy any amin’ny voninahiny